The Best Hoverboard Self Dheelitirka mooto 2017 - Jomo Technology Co., Ltd
Sababta ugu yeeray mooto is miisaamid sida "Hoverboard" waa in halka fuushan, waxa ay u muuqataa in aad sida waxaa ka dul tiro ka mid ah inches kor ugu hooseysa. Xusuusnow in aad sii wado xiriirka ay la dhulka ku. Tani waa heer sare ah laba-wheel isku dheelli mooto korontadain uu diyaar u yahay hab siin waayo-aragnimo dheeraad ah oo xasilloon, sababtoo ah fursadaha ay. Inta badan mootooyinka, kuwaas oo laga yaabo in lagu soo eedeeyay habboon baxay sanduuqa, oo laga yaabo in la siiyo Dhuxul faraska ku cusub oo ku saabsan nus saac ah si aad u dalbato hore fuushan ka badan waa in la gabi ahaanba lagu eedeeyay. Guddiga ayaa xawaare sare ee saacadiiba 12Km oo si fudud uyeelay laga yaabaa buuro iyo dhaadhacyadii in loox kale ma qaadi karaan. Marna ha ka tegin waxay ku xirnayn in ay habeen ku kici iyo sii ah in watch si qoto dheer on heerkulka of guddoonka halka uu ku amraya. Cabashada ugu weyn iyadoo la tixraacayo ahayd in dhibaato habka amraya
Tani smart mooto is miisaamid , xamuulka ah qof weyn oo shakhsi soo socda la Bluetooth (sida aad dalabka), waa sahlan inay ku raaxaystaan music jillaafo waxa on. Waxaa weliba waxay leedahay 500W matoorrada, awood xoog samaynta diyaar caadiga ah isticmaalaan. Sidoo kale aad loo hubiyo in laga yaabaa in aad mooto doorashada ayaa batari awoodda weyn. Taas daraaddeed mid, waxaad u baahan tahay si ay u eegaan fursadaha ka mid ah qaybaha kala duwan ee ay ka mid yihiin ammaanka, kaas oo laga shakiyi karin halkaan, xawaaraha, oo aynu haatan horey u hadlay oo ku saabsan, iyo culayska ugu badan in ay ka mid arrimo kala duwan oo taageero laga yaabaa. Waa ha qiimeeyo inkastoo haddii karo ma aha arin weyn kuu iyada oo sababtu tahay waxa ka buuxa fursadaha. Fursadaha Waxaa a boqol% gaar ogaada sida loogu tala galay in aad ka bixin khibrad u saaran gaadiid la jecel yahay. Waxay noqon karaan weyn raaxo u da 'badan oo ay soo gudbiyaan hab gaar ah si aad u hesho wareega.
Haddaba aynu jebin u leedahay, si aad u hesho dhadhansiinno Dadka rush maanka-qarxiyaan this. Sidoo kale, waxaa si fudud ma jebin doono xitaa maalinta by isticmaalka maalin. Waxaa loogu talagalay qof walba oo uu ku saabsan isticmaalka joogta ah ku salaysan sida kale ee toy ah cayaar taajirka maalkiisa. Waxbarashada bartaan sida loo socdo oo hoverboard a waa in ay ahaataa xiiso leh oo dheeraad ah ka dib marka aad baranina jidka shuqullada qalab iyo sida qaybaha ay ula falgalaan midba midka kale. Mar kasta oo aad safar walax this skater kasta istaago in ay qaataan safar. Riders lahaa imtixaanka fiican qaybo banjarin hadda iyo mar kale. Xakamaynta hoverboard la go'an wheel yar waa wax fudud oo ay leeyihiin rabitaan ah in ay jawaab degdeg ah si kastaba ha ahaatee iyadoo taayirada weyn waxay qaadataa waqti si uu u gudbiyo si kaamil ah on your Marba. Sida aan la sheegin xirfadlayaasha iyo khasaaraha of hoverboard kasta oo diiwaankan, oo la mid ah aan samayn lahaayeen la hoverboard PowerBoard ah. Laakiin waxaa kale oo jira faahfaahin kale ee muhiimka ah si ay u eegno. Sida ay tahay 2017, sida xaqiiqada ah shaqsiyaadka qaadan doonaa eegno aad oo ay leeyihiin dareen ah layaabna leh isku dar ah ee hinaaso. Waa doorashada ugu nabad badan, sababtoo ah waxaan KOOWHEEL leeyihiin hoverboards fiican ka soo saarayaasha ugu badan ama shirkadaha sare qaybo hoverboard ugu soo saarta wax ganacsi ah iyo qiimaha waa dhab, qiimaha la awoodi karo.
waqti Post: Sep-19-2017